Phandeeyar Blog Page 4
Data meetup: TimelineJS
September 24, 2017 Thet Aung Open Data
Is the story you are telling is in chronological order? Last week on the 20th, we learned the TimelineJS which is an open-source tool to create visually rich and interactive timelines developed by KnightLab. We’ll be havingaseries meetup on the use of different tools. Stay…
September 21, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Entrepreneurship, Founders, Marketing, Media, News, Startups, Tech
၁။ တွဲဖက် တည်ထောင်သူတွေကို ကောင်းကောင်း ရွေးချယ်ပါ။ / Pick good cofounders
အိမ်ခြံမြေလောကတွင် တည်နေရာ အရေးကြီးသကဲ့သို့ Startup လောကတွင် တွဲဖက်တည်ထောင်သူတွေသည် အရေးကြီးပါသည်။ အိမ်တစ်ခုကို လန်ပြန်အောင် စိတ်တိုင်းကြ ပြုပြင်လို့ရသော်ငြား အိမ်၏တည်နေရာကိုတော့ ပြောင်းလို့ရမည် မဟုတ်ပေ။ Startup ရဲ့ လုပ်ငန်းပုံစံအနေအထားကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလို့ရသော်ငြား တွဲဖက် တည်ထောင်သူတွေ ပြောင်းပြစ်ဖို့ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပေ။
အနှောင်းသေချာဖို့ အစကောင်းအောင် တည်ထောင်သူကောင်းများဖြင့် စတင်ပါ။
September 15, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Article, Entrepreneurship, Startups, Tech, Uncategorized
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုတွင် သုံးစွဲသူ၊ ဝယ်သူ များပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှသာ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အောင်မြင်ရန် မိမိ၏ ဖောက်သည်များ၏ customer journey ကိုအသေးစိတ် တိုင်းထွာလေ့လာရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းတို့မှ မိမိလုပ်ငန်းအား ကနဦး ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှစ၍ နောက်ဆုံး မိမိလုပ်ငန်းအား အားပေးသည်အထိ အဆင့်ဆင့်တိုင်းကို ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစားသင့်သည်။
Startup pirate metrics ဆိုသည်မှာ customer journey ၏အဆင့်ဆင့်ကို ပုံဖော်ထားသော AARRR! ဟု အတိုကောက် မှတ်ယူနိုင်သည့် တိုင်းထွာနိုင်ရန် အချက်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအချက်များမှာ
September 8, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Entrepreneurship, Founders, Marketing, News, Startups, Tech, Uncategorized
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု (innovation) နှင့် နည်းပညာ အခြေခံသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို စျေးကွက်အတွင်း ထိုးဖောက်ရာတွင် သိသင့်သည် သီအိုရီ ၂ ခုဖြစ်သော Innovation S-curve နှင့် Diffusion of Innovations တို့ကို ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ အမျိုးမျိုးရှိပြီး၊ Oslo OECD Manual အရ အဓိက ၄ မျိုးသတ်မှတ်ထားရာ
Product/service innovation − ရောင်းကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တို့အား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆန်းသစ်တီထွင် ထားခြင်း
Process innovation − ရောင်းကုန် ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းအား ဆန်းသစ်တီထွင် ထားခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ပုံစံအား ဆန်းသစ်တီထွင်…
Customer Lifetime Value & Customer Acquisition Cost
September 1, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Entrepreneurship, Events, Startups, Tech
LTV (customer lifetime value) or CLTV – သုံးစွဲသူ (သို့) ဖောက်သည် ၁ဦး၏ သုံးစွဲသည့်၊ အားပေးသည့် သက်တမ်းအတွင်း ရရှိသည့် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ကိုရည်ညွှန်းသည်။
CPA (cost per acquisition) or CAC (customer acquisition cost) – သုံးစွဲသူ (သို့) ဖောက်သည် ၁ဦးရရန် သုံးစွဲရသည့် ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် ကိုရည်ညွှန်းသည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် LTV သည် CPA ထက်များမှသာ…